BEST COMPANY TO WORK IN MYANMAR AWARD – GlobalNet
Global Technology Group (GTG) ဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဆု 🏆 “Employee’s Choice – Best Company to work in Myanmar”🎉🎉
🥰🥰 GTG အားဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဆု 🏆 “Employee’s Choice – Best Company to work in Myanmar” အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့်အတွက် အထူးပင် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
💁💁ဝန်ထမ်းများမှ ရွေးချယ်ပေးအပ်သောဆု ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် စစ်တမ်းများကို ရွေးချယ်ဖြေကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ထိုစစ်တမ်းကောက်ချက်များကို JobNet နှင့် Deloitte မှ စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
🎉🎉 GTG တွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျေနပ်လက်ခံမှု ( Satisfaction ) နှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ( Recognition) များနှင့်အတူ ဤဆုရရှိအောင်အကောင်းဆုံး ဖြေဆိုအားပေးမှုများကို အထူးပင်ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။
🏆🏆 Employee’s Choice – Best Company to work in Myanmar 🥳🥳
🥰🥰 We are thrilled to announce that GTG has been classified as among the “Best Companies to work in Myanmar 2020 – Employee’s choice” .
😎😎 Employee’s Choice – meaning that it was our employees that voted us in.
💁💁 We are appreciative of the support of our employees and are mindful of their role in ensuring that GTG remainsasuccessful and sustainable model. To each one, we wish to sayabig “Thank You So Much”.
DIGITAL FRONTRUNNERS JOIN FORCES TO PUSH FORWARD T